SOOMAALIYA Dhacdooyinkii 2017: Human Rights Watch (HRW) – Radio Daljir
SOOMAALIYA Dhacdooyinkii 2017: Human Rights Watch (HRW)
Janaayo 20, 2018 3:16 b 0
Colaadda hubaysan ee ka jirta Soomaaliya, tacaddiyada ay geysanayaan dhammaan dhinacyada is haya, iyo dhibaato cusub oo dhanka bani’aadannimada ah ayaa culays weyn ku haya dadka rayidka ah.
Ururka Al-Shabab ayaa boqolaal qof oo rayid ah si aan kala sooc lahayn ugu laayay weerarro uu fuliyay, gaar ahaan kuwo uu ka geystay magaalada Muqdisho. Howlgallada milateri ee ka dhanka ah Al-Shabab, kuwaasoo mararka qaar jebiya xeerarka dagaalka, ayna fuliyaan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo weliba ciidamo kale oo shisheeye ah ayaa geystay dhimasho, dhaawac iyo barakac soo gaaray dadka rayidka ah. Waxaa sidoo kale dhibaato taa la mid ah ay ka dhalatay dagaallada u dhexeeya beelaha Soomaaliya. 14-kii bishii Oktoobar, qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay bartamaha Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 358 qof, tiradaasi oo ah tii ugu badneyd ee maalin qura dhimata inta la ogyahay taariikhda dalka. Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxaasi. Howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ayaa sheegay in 1,228 oo qof oo rayid ah ay Soomaaliya ku dhinteen mudadii u dhexeysay Janaayo ilaa Sebtembar 2017, kala bar dadkaasina waxaa dilay ururka Al-Shabab.
Bishii Febraayo, Maxamed Cabdullaahi Maxamed “Farmaajo” ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya, ka dib hannaan doorasho oo muddo qaatay, muranna dhaliyay. Isqabqabsi siyaasadeed oo mararka qaar u dhexeeyay maamul goboleedyada federaalka ayaa dib u dhac ku keenay isbedelka loo baahan yahay ee dhinacyada cadaallada iyo ammaanka, mararka qaarna waxaa ka dhashay rabshado saameeyay dadka rayidka ah.
Ayadoo qeybo ka mid ah dalka ay qarka u saaran yihiin macluul, ayaa boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah waxay ka barakaceen deegaannadooda, taasoo guud ahaan tirade dadka barakacayaasha ka dhigtay mid ka badan laba milyan oo qof. Inkastoo dowladda cusub ay mudnaanta koobaad siisay wax ka qabashada xaaladda bani’aadannimo, ayaa haddana dad badan oo rayid ah waxay wajaheen xadgudubyo waaweyn, iyo inay heli waayaan adeegyada asaasiga ah oo ku filan.
Sanadka 2017, waxaa aad u yaraa horumarka laga sameeyay la xisaabtanka laamaha ammaanka ee weerarrada la beegsada weriyayaasha isla markaana kula kaca xarig aan loo meeldayin iyo ilaalinta xuquuqda dadka ku barakacay gudaha dalka. Dowladda ayaa tallaabo wanaagsan qaaday markii ay samaysay ururka qaran ee xuquuqda aadanaha.
Tacaddiyada ay Galeen Ciidamada Dowladda iyo Kuwa Taabacsan
Ciidamada ammaanka ayaa dilal iyo dhaawac u geystay dadka rayidka ah xilliyo ay dhacayeen iska horimaad dhexdooda ah oo salka ku haya dhul, gacan ku haynta isbaarooyin iyo raashin la qeybinayay. 9-kii bishii Juun, ugu yaraan 13 qof oo rayid ah ayaa dhintay 20 kalena way dhaawacmeen ka dib dagaal dhexmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo isku maan-dhaafay raashin lagu qeybinayay magaalada Baydhabo.
Dad rayid ah ayaa la beegsaday ama lala eegtay weerarro aan kala sooc lahayn xilliyo ay maleeshiyo beeleed iyo ciidamo maamul goboleed ku dagaallamayeen kheyraad, jagooyin siyaasadeed iyo gacan ku hayn deegaan, gaar ahaan deegaanno ka tirsan Shabeellaha hoose, Hiiraan iyo Galguduud.
Hay’adda qaran ee sirdoonka iyo nabadsugidda (NISA) iyo hay’adda sirdoonka Puntlad (PIS), oo labaduba aan u howlgalin si sharci ah, ayaa qabtay oo si aan loo meeldayin u xiray shakhsiyaad, kuwaasoo aan dembi lagu soo oogin, loona ogolaan inay helaan metalaad sharci, isla markaana qoysaskooda loo diiday inay booqdaan. Laamahaasi sirdoonka ayaa dhowr goor jirdilay oo si xun ula dhaqmay dad la sheegay in lagu tuhmay argagixisanimo si ay dembi u qirtaan ama ay xog uga helaan.
Maxkamadaha ciidanka ayaa qaada kiisas badan oo ay ku jiraan kuwa la xiriira argagixisanimada, ayadoo hannaanka dacwad qaadistoodana uu ka hooseeyo heerka caalamiga ah ee maxkamadeynta cadaallada ah. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2017, sagaal qof ayaa lagu fuliyay xukun dil ah ka dib markii ay dembi ku heshay maxkamadda ciidanka, waxaana deegaannada ay arrintaasi ka dhacday ka mid ah Puntland oo lagu toogtay dad loo haystay dembiyo la xiriira argagixisanimo. Todobo qof oo ku eedaysanaa inay dil geysteen uuna ka mid yahay canug, ayay Puntland 13-kii Febraayo ku xukuntay dil, ayadoo maxkamaddu ku tiirsanayd qirasho ay dadkaasi xoog uga sheegsiisay hay’adda PIS. Shan ka mid ah dadkaasi ayaa bishii Abriil lagu fuliyay xukunka dilka ah.
Sida uu sheegay xafiiska Qaramada Midoobay ee UNSOM, ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee shisheeye ayaa mas’uul ka ahaa dhimashada iyo dhaawaca dad rayid ah xilliyada ay fulinayeen duqeymaha iyo howlgalada dhulka ah ee ka dhanka ah Al-Shabab. 26-kii Sebtembar, duqeyn la sheegay inay diyaaradaha dagaalka ee Kenya ka geysteen deegaanka Taraka ee gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo rayid ah, waxaana lagu dilay 20 neef oo geel ah. Deegaanka ayaa waxaa xilliyadaasi qabsaday dagaalyahanno ka tirsan Alshabab.
Ma jirin ama aad ayay u yarayd in ciidamada ammaanka lagula xisaabtamo tacaddiyada ay geysteen.
Dalalka ciidamada ku biiriyay howlgalka AMISOM ayaan si kufilan u adeegsan tallaabooyinka u furan ee ay ku wanaajin karaan isla xisaabtanka. AMISOM ayaa baartay dil sharci darro ah oo ciidamada Itoobiya ay bishii July 2016 u geysteen 14 qof oo rayid ah oo ku sugnaa tuulo ka tirsan gobolka Baay, balse weli ma aanay shaacin waxa ay ku ogaatay baaritaanka, magdhawna ma aanay siin qoysaska dadkaasi la laayay.
Xeer Ciqaabeedka Soomaaliya oo hadda dib u eegis lagu samaynayo, ayaa ku tilmaama tacaddiyada dhanka galmada ah “dembiyo lid ku ah dhawrsanaanta iyo sharafta galmada” halkii uu ku tilmaami lahaa ku xadgudubka sharafta jirka qofka, waxaana uu ciqaabaa dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda, asagoona ciqaab dambiyeed saara hadallada loo arko inay xadgudub ku yihiin mas’uuliyiinta dowladda.
Tacaddiyada uu Geystay Ururka Al-Shabab
Ururka Al-Shabab ayaa geystay tacaddiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin dilal aan loo meeldayin, gaar ahaan xubnaha ka tirsan ururkaasi ee lagu eedeeyo basaasnimada ama inay gacan saar la leeyihiin dowladda, iyo mararka qaar dadka sinaysta. Waxa uu ururkaasi si qasab ah ku qortaa dad waaweyn iyo carruurba, waxayna dadka xoog iyo cabsigelin uga qaadaan “canshuur”. 27-kii Oktoobar, ururka Al-Shabab ayaa haweeney dhagax ku dilay magaalada Saakow, ayadoo lagu eedeeyay inay sinaysatay guur ka dib.
Weerarrada ururkaasi ee ka dhanka ah dadka rayidka ah iyo hantidooda, ayagoo adeegsanaya gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa sare u qaaday khasaaraha nafeed ee soo gaara shacabka. Al-Shabab ayaa sidoo kale sheegatay dhowr dilal khaarijin ah, gaar ahaan kuwo loo geystay xubno ka tirsan dowladda iyo ergaydii doorashada ka qeyb qaatay.
Dabayaaqadii bishii Mey, dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabab ayaa dad rayid ah afduubtay, xoolana qaatay, isla markaana gubay guryo, waxaana duulaannadaasi oo ka dhacay gobolka la isku haysto ee Shabeellaha hoose ku barakacay in ka badan 15,000 oo qof.
Dadka Barakacay iyo Helitaanka Gargaarka Bani’aadannimo
Khatar macluul ee ka dhacday Soomaaliya ayaa jirtay ilaa dhammaadka sanadkii 2017, ayadoo in ka badan kala bar shacabka dalka oo lagu qiyaaso 12.4 milyan ay u baahan yihiin gargaar bani’aadannimo oo degdeg ah.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, hal milyan oo dad cusub ah ayaa ku barakacy Soomaaliya sanadkii 2017, taasoo tirada guud ee barakacayaasha gudaha ka dhigtay 2.1 milyan oo qof. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa wajahayay xaalad adag, ayagoo aan helin gargaar ku filan, dhanka kalena wajahayay tacaddiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dilal aan kala sooc lahayn, raritaan qasab ah iyo xadgudubyo galmo. Mudadii u dhexeysay Mey iyo Nofembar, in ka badan 60,000 oo qof oo barakacayaal ah ayaa xoog looga raray deegaannadii ay ku noolaayeen, waxaana arrintaasi qeyb ka ahaa ciidamada dowladda. Boqolaal qof oo kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee Kenya ka dib markii la adkeeyay hannaanka magangelyada, ayaa ku biiray dadka ku barakacsan gudaha Soomaaliya.
Hay’adaha gargaarka ee doonaya inay gaaraan dadka baahan ayaa wajahay cabaqado ay ka mid yihiin amni darro iyo xannibaad ay kala kulmeen dhinacyada isku haya colaadda Soomaaliya, ayadoo weerarro lala beegsaday shaqaalaha samafalka. Shuruucda dalalka shisheeye ee la dagaallanka argagixasada, gaar ahaan sharciga Marykanka ee loo fasiran karo in gargaarka qaarkii uu taageero maadi ah u yahay argagixisada, ayaa caqabad ku noqday taakulayn ka iman lahayd dibedda.
Ururka Al-Shabab ayaa dhammaan hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwo kale oo gargaarka ka shaqeeya ka mamnuucay deegaannada uu ka taliyo. Waxa uu sidoo kale go’doomiyay deegaannada ay dowladda ka arrimiso, mararka qaarna waxa uu weerarray dadka rayidka ah ee jebiya go’doomintaasi.
Ciidamada dowladda iyo maleeshiyo beeleedka ayaa dhankooda baad ka qaaday shacabka iyo gaadiidka gargaarka sida ee mara isbaarooyinkooda.
Tacaddiyada ka Dhanka ah Carruurta
Kooxaha hubaysan ayaa weli dil iyo dhaawac u geysta carruurta, waxaana ay beegsadaan xarumaha waxbarashada. 18-kii Abriil, dabley aan la aqoonsan ayaa hoobiyayaal ku riday xaafad dad badani ku nool yihiin oo ku taal Muqdisho, waxaana ay ku dhaceen iskuul iyo guri, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo rayid ah, ayna ka mid tahay gabar 8 jir ah. Waxaa duqeyntaasi ku dhaawacmay sideed qof oo kale.
Dhinacyada hubaysan ayaa sidoo kale carruur qortay oo u adeegsaday dagaallada milateri. Ururka Al-Shabab ayaa waayihii dambe xoogga saaray dugsiyada Quraanka, waxaana uu carruurta baraa afkaartiisa gaar ahaan bulshooyinka ku nool deegaannada Mudug, Galguduud iyo Baay.
Dowladda federaalka ayaa ballanqaaday inay dhaqancelin u samayneyso carruurta lala xiriiriyay Al-Shabab. Haseyeeshee, maxkamadaha milateriga ayaa dacwad kusoo oogay oo mararka qaar xukun adag ku riday carruur lagu eedeeyay argagixisanimo, hannaanka dacwadahaasina ma aanu gaarsiisneyn heerka caalamiga ah ee maxkamadeynta carruurta. Maamulka Puntland ayaa carruur ka badan 11 waxa uu ku xukumay dil, kuwaasoo loo haystay dembiyo la xiriira argagixisanimo iyo dil. Maxkamadda milateriga ayaa markii hore xukunnadaasi riday, inkastoo markii dambe dhammaantood la cafiyay.
Dumarka iyo gabdhaha ku barakacay gudaha dalka ayaa khatar gaar ah ugu jira tacaddiyada galmada iyo kuwa ka dhanka ah haweenka ee ay geystaan ragga hubaysan oo ay ku jiraan askarta dowladda, maleeshiyaadka iyo kuwa rayidka ah. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, waxaa sanadkii 2017 sare u kacay kiisaska la soo sheegay ee xadgudubyada galmada ee ka dhaca xeryaha dadka soo barakacay.
Inkastoo dowladdu ay qaaday tallaabooyinka lagu wanaajinayo qaabka ay hay’adaheeda wax uga qabanayaan dembiyadda xadgudubka galmada, gaar ahaan inay samaysan waax xadgudubyada galmada qaabilsan oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo in Puntland ay ansixisay sharciga ciqaabta kufsiga, ayaa haddana waxaa hooseysay ku dhaqanka tallaabooyinkaasi. Horraantii 2017, maamulka Puntland ayaa ogolaaday in maxkamad Islaami ah ay dhagaysato dacwadda dhalinyaro lagu eedeeyay inay magaalada Goldogob ku faraxumeeyeen laba gabdhood, halkii dacwad oogayaasha maamulkaasi ay xoogga saari lahaayeen in raggaasi lagu qaado sharciga cusub ee la meelmariyay.
Xayiraadda Dhanka Xoriyadda Hadalka
Dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo Al-Shabab ayaa sii waday beegsiga ay kamid tahay u cagajugleynta iyo cabsi gelinta warbaahinta.
12-kii Maarso, Cabdixamiid Maxamed Cismaan oo ah farsamayaqaan iyo tifaftire la shaqeeya telefishinka Universal ayaa ka badbaaday qarax ka dhacay gudaha gaari uu watay.
Maamulka Puntland ayaa xarig aan loo meeldayin kula kacay weriyayaal iyo dad kale oo rayid ah kuwaasoo dhaliilay hogaanka maamulkaasi iyo go’aanno uu gaaray garsoorka. 2-dii July, weriye Axmed Cali Kilwe ayaa waxaa xiray booliska la dagaallanka argagixisada waxaana uu u xirnaa laba todobaad asagoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin. Waxaa la sheegay in loo haystay eedeyn uu u jeediyay madaxweynaha Puntland.
Arrinta wanaagsan ayaa ah in wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ballanqaaday in dib u eegis lagu samaynayo xeerka qaran ee saxaafadda 2016, balse wax ka bedelidda la soo jeediyay ayaan sharcigaasi gaarsiin heerarka caalamiga ah.
Maamulka Somaliland ayaa sii waday xakameynta xoriyadda hadalka gaar ahaan arrimaha uu u arko inay xasaasiga yihiin, sida dib u dhiska dekedda Berbera iyo saldhigga ciidan ee uu Isutagga Imaaraadka Carabta ka samaysan rabo halkaa, iyo weliba xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya. Maamulkaasi ayaa muddo afar maalmood ah hawada ka saaray baraha ay bulshada ku wada xiriirto intii ay socotay doorashada madaxtinnimo, ka dib codsi uga yimid guddiga qaran ee doorashooyinka. Somaliland ayaa inta badan muddo kooban xirta weriyayaasha, saddex goorna weriyayaal ayaa lagu soo eedeeyay dacwado dembi.
Xubnaha Muhiimka ah ee Beesha Caalamka
Taageeradda caalamka ayaa xoogga lagu saaray dhismaha laamaha ammaanka ee Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin kuwa maamul goboleedyada, ayadoo aan muhiimad weyn la siin xaqiijinta in si cadaalad ah loogula xisaabtamo tacaddiyada ay geystaan. Shirkii Soomaaliya ee bishii Mey ka dhacay London, ayaa dhinacyada howlwadaaga la ah dalka waxay ansixiyeen qorshe qeexaya dhismaha ciidamada ammaanka ee heer qaran iyo heer maamul goboleed.
Deeq bixiyayaasha caalamiga ah ayaa taageero dhaqaale ku bixiyay barnaamijka muranka dhaliyay ee ay dowladda federaalka cafis ugu fidinayso dagaalyahannada Al-Shabab. Bishii Agoosto, Sheekh Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa hogaamiyayaashii hore ee Al-Shabab ayaa laga dejiyay Muqdisho. Dowladaha shisheeye ma aanay dalban in baaritaan lagu sameeyo tacaddiyadii waaweynaa ee dhacay xilligii uu ka midka ahaa hogaamiyayaasha ururkaasi.
Bishii Maarso, Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump ayaa wasaaraddiisa gaashaandhigga awood dheeraad ah u siiyay inay howgallo ka fuliso Soomaaliya, asagoo qeybo ka mid ah dalka ku tilmaamay “goobo ay colaaddi ka taagan tahay.” 13-kii bishii Nofembar, Pentagon-ka Maraykanka ayaa qiray inuu 30 duqeyn cirka ah iyo ugu yaraan afar howlgal wadajir ah ka fuliyay gudaha Soomaaliya. Pentagon-ka ayaa sidoo kale sheegay inuu baaritaan ku samaynayo warar sheegaya in dad rayid ah lagu laayay laba howlgal oo bishii Agoosto ka dhacay Bariire iyo Jilib. Inkastoo warbaahintu ku warrantay in dadka lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay Bariire ay ahaayeen rayid, ayaa Maraykanku waxa uu sheegay in baaritaan ka dib ay u cadaatay in ay ahaayeen “cadow hubaysan”.
Dalalka Khaliijka, gaar ahaan Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa kordhiyay xiriirka milateri iyo kan siyaasadeed ee kala dhexeeya maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxay adeegsadeen cadaadis iyo sasabasho dhaqaale si ay uga hortagaan go’aanka “dhex-dhexaadnimada ah” ee ay dowladda federaalka ka qaadatay xasarada diblomaasi ee Qadar kala dhexeysa dalalka kale ee Khaliijka, arrintaasi oo xiisad ka dhex abuurtay gudaha Soomaaliya.
Maqaalo Kale 252 Wararka 18170
SOMALIA Events of 2017: Human Rights Watch Report